Azerbaidjan: Ireo Haino Aman-Jery Miaro Ireo Mafana Fo Sy Blaogera Voatazona Am-Ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 5:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Português, English
Na dia saika hita ao amin'ny Facebook avokoa aza ny ankamaroan'ny hetsika rehetra izay mbola hanohizan'ny mpampiasa aterineto ny fifampizaràna lahatsary ahitana ilay blaogera Adnan Hajizade sy ilay tanora mafana fo Emin Milli, notanana am-ponja herinandro lasa izay ary voaheloka higadra roa volana an-tranomaizina alohan'ny hitsarana azy, zara raha nisy hetsika vitsivitsy hita teny amin'ny filazambaovao mahazatra, kanefa efa miova izany amin'izao fotoana izao. Na izany aza, ny filazambaovaon'olontsotra aloha no tena mbola loharanom-baovao.
Tao anatinà lahatsoratra manokana avy amin'ny fo, tsaroan'i Fighting windmills? Take a pill.(Miady amin'ny Milina ahodin-drivotra ? Mihinàna fanafody.) ilay nàmany izay any am-pigadrana ankehitriny noho ny zavatra heverin'ny maro fa fiapangàna natosiky ny resaka politika.
Manana sary vaovao eto amin'ny solosaina fampiasako ato amin'ny biraoko aho – Emin manofahofa ny sainam-pirenena Azerbaijani manoloana ny tranoben'ny Firenena Mikambana ao New York. Ny sainan'ilay firenena iasàny sy iainany, ilay hany nofinofisiny mba ho afaka amin'ny kolikoly sy amin'ireo politisiana tsy manjary, ilay niverenany avy any New York, ilay hany igadran'izy sy Adnan roa volana farafahakeliny an-tranomaizina..
“Voninahitra ho an'ny olona iray ny maha mpanohitra ny tsy rariny azy” hoy ny iray tamin'ireo Zeorziana namako, rehefa nitantarako ny tantara manontolo. Izany no mety holazain'i Emin, hoy aho nieritreritra. Ary avy eo, nisaina ny mety ho ataony raha misy voatazona am-ponja ny iray aminay.
Hoy izy ireo hoe “Afaka gadrainao ny vatako fa tsy ny fanahiko”. Tena izay mihitsy, afaka alainareo i Emin sy Adnan, fa tsy ho foana mihitsy ny fifankatiavanay, na ahoana na ahoana. ilay fitiavana madio indrindra, tsy misy fepetra, tsy voavidin'ny volan-tsolika, izay mahatonga ny namako hiandry ahy ho lasa nenitoa ary ho azoko antoka fa hizotra tsara ny fodiako, ilay nahatonga olona 50 isa hihira ny hiram-pirenena Azerbaijani manoloana ny Fitsarana Sabail. Ilay karazana fitiavana, izay mamporisika ny olona manerana izao tontolo izao hanadino ny tahotra ary hiady ho amin'ny fahafahan'ny namantsika na amin'ny fomba ahoana na ahoana.
Miara Mijoro izahay!
Humay, naman'i Hajizade hafa, namoaka teny manokana ihany koa tao amin'ny pejiny Facebook mba hanamarihana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany.
Ankehitriny, mety mangidy ireo teny mahafinaritra, saingy marina fa tombontsoa ny nahafantarana an'i Adnan akaiky. Tena tsy fahita firy izy. Ao amin'ny firenena mpanara-drenirano tahaka ny antsika, i Adnan dia niaina araka ny fahamarinany azy manokana, namaritra ny tenany ho niaina tanaty tebiteby hatrany teo amin'ny androm-piainany, kanefa tsy natahotra ny hametraka fanamby tamin'ny tenany na ny hafa. […]
Adnan, ezizim, 26 taona androany ianao. Any am-ponja no hankalazànao ity andro ity. Na mety tsy hankalaza izany akory aza ianao. Fa izahay kosa hankalaza izany. Faly aho ny amin'ny nahatongavanao teto an-tany sy teo amin'ny fiainanay. Faly aho ny amin'ny fanehoanao ny mety ho zavabitan'olon-tokana amin'ny alalan'ny tenany irery. Faly koa aho ny amin'ny nanaporofoanao fa aleo lehilahy iray mijoro amin'ny fahamarinana toy izay lehilahy an-jatony feno fitiavan-tombontsoa. Faly aho ny amin'ny fahasahianao manonofy ary mitondra anay amin'izany ihany koa. Azafady re tohizo ny nofinofinao. Tsy mila tonombavaka arahina alahelo ho anà nofy iray aho. Ary mba miverena azafady. Malahelo anao izahay aty.
Niaraka tamin'izay ihany koa, fikambanana iray tsy miankina sy tsy mitady tombontsoa mikarakara mpanao gazety sy mafana fo any amin'ny firenena toa an'i Azerbaijan, no milaza fa tena zava-dehibe tokoa ny blaogy sy ny twitter amin'ny fampahafantarana izao tontolo izao ny fisamborana an'i Hajizade sy Milli, efa nialoha làlana lavitra an'ireo filazambaovao mahazatra.
24 ora taty aoriany vao navoakan'ny filazambaovao mahazatra ny fandrakofana ny fisamborana an'ireo roalahy mpitarika hetsiky ny tanora tao Azerbaijan ireo. Kanefa, nandritra izany fotoana izany, am-polony mahery ireo blaogy efa nampahafantatra izany ary angamba an-jatony ireo tweet nalefa. Teny rehetra teny ilay vaovao; teny rehetra teny fa tsy tao amin'ny filazambaovao mahazatra. Rehefa tonga ny filazambaovao mahazatra, fampahatsiahivana ny vaovao nitranga omaly no nataon'izy ireo. Angamba mety tsy dia tara loatra ho an'ireo filazambaovao mpitsentsitra sy mpanaparitaka rojom-baovao izany, kanefa tara loatra ho an'ireo izay mila vaovao amin'ny fotoana itrangany.
Nitranga ny Zoma sy Sabotsy lasa teo izany rehetra izany. Tsy mahita teny ilazàna ilay tantara tao amin'ny filazambaovao mahazatra aho .
24 teo ho eo aty aoriana vao nameno ny banga ilay rojom_baovao. AFP no nandefa voalohany santionany ‘Blaogera nogadraina noho ny fiampangana tsy marimpototra tao Azerbaijan: mpikambana avy amin'ny ankavanana’, ary Reuters ‘Blaogera Azeriana nogadraina, raharaha goavan'ny famoretan'ny resaka solika’
Soa ihany, Reuters fa nanampy fijery hafa; tamin'ny filazàny fa BP, izay nampiasa ny iray tamin'ilay lehilahy voasambotra no manosika hanao izay hanafahana azy.
Ireo ampahan-dahatsoratra roa tsara ireo no naverina nobitsihana ary niely toy ny aretina sy haingana, saingy efa 24 taty aoriana.
Faly aho fa tsy nila niandry ireo filazambaovao mahazatra vao naharaka. Fa raha tsy izany, very 24 ora ary mety efa vaovao omaly no novakiako.
Toy ny fifandrifian-javatra, koa satria tsingerintaona nahaterahan'i Adnan Hajizade ny andro androany, afaka mametraka hafatra izay tiany ao amin'ny bilaogy OL! daholo ireo mpamaky ny Global Voices, na hafatra iray amin'izao fotoana izao anaty aterneto ho fanohanana ireo mafana fo nogadraina. Pejy Facebook iray no natokana ho fanohanana an'i Emin Milli sy Adnan Hajizada. Nisy fanangonantsonia afaka nosoniavina koa tato anaty aterneto ato.
15 ora izayKazakhstan